စဉ်ဆက်မပြတ်အအေးကိုလှိမ့ 2.5-6mm (အေးဖြန်ကွိုင်ရှင်းပြီ)
လူပျိုစာရွက် isobaric သံမဏိအနိမ့်အလွိုင်းသံမဏိ
သေးငယ်တဲ့-bore2,5-6mm 01 အောင်အကွေ့အကောက်များသောသေဆုံး
ရိုးတံ 04 မရှိပဲ Vane
လူပျိုစာရွက် isobaric သံမဏိအနိမ့်အလွိုင်း stee ...
စဉ်ဆက်မပြတ်အအေးကိုလှိမ့ 2.5-6mm (အေးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကွိုင်ရှင်းပြီ ...
ကျနော်တို့ 40-800 မီလီမီတာ, 2-30 မီလီမီတာ၏ 8-400 မီလီမီတာနှင့်အထူ၏အတွင်းပိုင်းအချင်း၏အပြင်ဘက်အချင်းတွေနဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်လိမ်ဓါးထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဓါးပစ္စည်းကာဗွန်သံမဏိ, မန်းဂနိစ်သံမဏိနှင့်သံမဏိဖြစ်ပါတယ်။ လည်ပတ်လမျးညှနျခ left နှင့်ညာဘက်, လိမ်ဓါးနှင့်လွန်ဝင်ရိုးအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ချက်များ၏အရှည်နိုင်ပါသည်။ ဒီထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်စိုက်ပျိုးရေးရိတ်သိမ်းစက်စပါးအပြောင်းအလဲနဲ့စက်ယန္တရား, ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်း, အင်ဂျင်နီယာစက်ယန္တရား, ဓာတုစက်ယန္တရား, ရွှံ့နွံကုသမှုတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ...
ကျနော်တို့ 40-800 မီလီမီတာ, 2-30 မီလီမီတာ၏ 8-400 မီလီမီတာနှင့်အထူ၏အတွင်းပိုင်းအချင်း၏အပြင်ဘက်အချင်းတွေနဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်လိမ်ဓါးထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဓါးပစ္စည်းကာဗွန်သံမဏိ, မန်းဂနိစ်သံမဏိနှင့်သံမဏိဖြစ်ပါတယ်။ လည်ပတ်လမျးညှနျခ left နှင့်ညာဘက်, လိမ်ဓါးနှင့်လွန်ဝင်ရိုးအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ချက်များ၏အရှည်နိုင်ပါသည်။ ဒီထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်စိုက်ပျိုးရေးရိတ်သိမ်းစက်စပါးအပြောင်းအလဲနဲ့စက်ယန္တရား, ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်း, အင်ဂျင်နီယာစက်ယန္တရား, ဓာတုစက်ယန္တရား, ရွှံ့နွံကုသမှုပစ္စည်းကိရိယာများ, သတ္တုတူးဖော်ရေးစက်ယန္တရား, တူးဖော်ခြင်းစက်ပစ္စည်းအမှုန့်, granular, ကြီးမားတဲ့ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ထုတ်လုပ်မှုဖောက်သည်ပုံဆွဲခြင်းနှင့်နမူနာအဆိုအရစိတ်ကြိုက်ခံရနိုင်သည်အတွင်းအချင်းထက် သာ. ကြီးမြတ်သို့မဟုတ် 8 မီလီမီတာညီမျှသည်ပြင်အချင်းထက်လျော့နည်းသို့မဟုတ် 800mm နဲ့ညီ, အထူ 3mm-20mm ဖြစ်ပြီး, မည်သည့်အရှည်, မည်သည့်ဝက်အူ pitch.Rotating ဦးတည်ချက် လက်ဝဲနှင့်လက်ယာ၏ဓါး၏ကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များနိုင်ပါတယ်
ထက်ပိုမို 20mm ၏ 3-5mm နှင့်အတွင်းပိုင်းအချင်းနှင့်အထက်နည်း 800mm ၏အပြင်ဘက်အချင်း၏အထူဖို့သက်ဆိုင်သောဖြစ်သော 1. အဆက်မပြတ်အအေးကိုလှိမ့အမျိုးအစား။
2. 3-20mm ၏အထူဖို့သက်ဆိုင်သောအဆက်မပြတ်အကွေ့အကောက်များသောအမျိုးအစား, 8 မီလီမီတာသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၏ပြည်တွင်းရေးအချင်းများနှင့် 200mm ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း၏ပြင်ပအချင်း။
3. အားလုံးမော်ဒယ်များသက်ဆိုင် extension ကိုအမျိုးအစား, နေမှုကိုချေဖျက်ပေမယ့်အထူးမှိုလုပ်ရမည်။
ယခင်: တငျမွှောကျ 01
နောက်တစ်ခု: တငျမွှောကျ 03
နေရပ်လိပ်စာ: Jiangzhuang ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပန်းခြံ, Gaomi စီးတီး, ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်
အင်္ဂါရပ်များနှင့်ရိုးတံ-လျော့နည်း SC ၏လျှောက်လွှာ ...